Dareenka Dadka Somaliland iyo Siyaasiga Ambadka ah
Monday June 15, 2015 - 17:44:19 in Editorials by Super Admin
Amiro, Texas waa magaalo yar oo ku taal gobalka Texas ee USA oo dadkiisa tiradiisu tahay 190, 695 (census 2010) oo ah ilaa in ka yar 20% tirad dadka ee ku nool caasumada Hargeisa.
Amiro, Texas waa magaalo yar oo ku taal gobalka Texas ee USA oo dadkiisa tiradiisu tahay 190, 695 (census 2010) oo ah ilaa in ka yar 20% tirad dadka ee ku nool caasumada Hargeisa. Balse ay dhici doonta mar ay Caasumda Hargeisa gaadho horumarka iyo bilicda magaaladaasi ay leedahay, gaar ahaan dhinaca wadooyinka. Hadaba Amarillo waa magalo ay ku nool yihiin dad reer Somaliland ah oo faro ku tiris ah. Magaaladan ayaan soo gaadhay wiigii hore. Hadaba suaash maqaalkani waxay tahay, halku gaadhsiisan yahay dereenka shacbiga reer Somaliland ee Amarillo, maxayse kaga duwan yihiin siyaasiyinteena habowga iyo jarkaboodka ah? Waa maaxayse fikirka iga kordhay markaad caalmaka meelkasta oo aad marayso gaadhsiiso Somaliland baan ahay?
Suaalaha mawducaygani u baxayo, waxaa jawaabtooda budhiga u ah:
fikirka aan ka qaatay Saarkiisha Marykan ee laanta Socodaalka ee Airportka la yidhaa, Dallas Fort Worth ; iyo
Wiil aan adeer u ahay oo 18 jir ah iyo shacabka Somaliland ee Amarillo degan.
Hadaan ku horay, qodobkayga kowaad, Sarkaalkii laanta socodaalka ee aan la kulmay (immigration Officer). Markaan Dalku galkaygii uu dhibay ayuu igu yidhi " Maxaad u timid Marykanka?”. Kolkaasaan ku idhi waxaan soo booqday walaalkay iyo reerkiisa oo degan magalada Amarillo. Marku uu intaa maraayo ayuu Passporkii eegay kolkaasu indhaha ku dhuftay, ku dhashay Hargeisa. Kolkaasu yidhi Hargeisa waligay wiigan ayaan maqalkeeda kow ii ahyid waxaana ay tahay markii labaad ee aan wiig gudihii aan hadan aan la kulmo magaca magalaada Hargeisa. Waxaa u xusay in dad reer Somaliland oo u la kulmay u sheegan isagoon waligii aqoon Somaliland iyo waxa ay Somaliya kaga duwan tahay. Wixii inataa ka dambeeyey aniga iyo sarkaalkii Laanta Socodaalku waxaan ku dhamaysanay suaalo la xidhiidha kaliya, Somaliland iyo taariikhdeeda oo aad ugu qushuucay. Akhrista waxaa laga yaaba inaad u qaadato mala awal balse waa xaqiiqa dhaba ah oo is oo martay oo aan taganahay tii ninkii yidhi haddii aan xilu furku xaaran ahayn waa idinku xilo furilahaa.
Waxa runtii mahad mudan muwaadinintii Somaliland ee wiiga iga soo horeeyey ee qadiyda Somaliland sarkaalka ka dhaadhiciyey. Waayo, maanta marka aad tagayso Marykanka kana soo jeedo caalmaka Islaamka waxad mudan kartaa suaalo tiro beel ah oo wakhti aad u dheer qaata, marana sababa in lagu soo celiyo Passporka aad doontaba wado. Waxaa ka markhaati kacaya arinkaa, ordyahanka Maxamed Faarax oo marar kala duwan dhiibatooyin kala kulamay, saraakiisha Socodaalka ee Marykanka. Balse waxaa hambalyo dhinacayga maalintaa mudnaa geesiyadii reer Somaliland ee magaca kor u qaday oo aniguna aan maliintaa sii baaciyey qadiyada Somaliland.
Qodobka labaad ayaa isna ah, Markaan Soo gaadhay magaalada, Amarillo ayaa mid ka mid ah wiilasha uu dhalay walaalkay oo ah 18 jir, islamarkaana ah nin aad u dheer ayaa waxa uu la baxay timo aad u dheer. Anigoo ka duulay in arinka marka in carqalada waxbarsho iyo mid shaqo ku keento ayaan ku idhi, adeer timaha iska soo xir, waxa uu igu jawaabay ilaa inta Somaliland laga aqoonsanayo timaha ma xiirayo. Bal hadaba miyaan kaaf iyo kala dheeri ahayn markaad fikirkaasi iyo dareenkaasi aad ku dhareriso, siyaasigeena jarboodka ah ee hankiisa ay hagto qabyaaladu ee dalka moodaya inuu dayn ku leeyahay balse gofnaha ku noqoday ee mali walba ku hanjabaya haddii tayda la waayo Somaliland waa la waayi. Iyo salaadinta maliwalba af xumada la soo fadhiya warbaahinta ee qaranka iyo shacabka ku noqday waslad xaaran ah oo dheerad ku ah. Shacbiga Somaliland ee magaaldan joogan qof aan aan cambaaraynayn ma lahayn siyaasad xumada siyaasiyinteena jarkaboodka ah ee aan dalka iyo dadka u tudhin.
Biyo dhac maqaalkani waxa weeyan in shacbiga Somaliland qadiyada Somaliland meel kasta oo ay marayaan calaamka iyo meel kasta oo ay joogaanba magaca Somaliland kor u qaadan – taas bayna tahay fikirka ugu wayn ee iga kordhay socodalkayga aan dalka USA ku joogo. Dareenka shacbiga iyo laxeljaclada dadka reer Amarillo ay ka leeyihiin dalkooda iyo dadkooda waa mid lid ku ah tan siyaasigeena habowga ah ku sugan dalka. Farinta aan ana u dirayaa ay tahay lagu odhan maayo Samadiidow dabin baan ku dhigan lagugu dili doona, waxaan leeyahay siyaasi u tudh dadkaaga iyo dalkaaga oo ka daa hagar daamada dalkaaga iyo dadkaaga jilicda san ee hiilka iyo hooda kaliya u baahan.
Waa Aragtidii, Axmed Cabdi Ciise,
What is your though on this article, please email me your comments directly to: isseahamed@hotmail.com